Etu esi emezi mmanu aka na ulo - Ezigbo mmanụ mmanụ | AromaEasy
Etu esi emezi Sanitizer na ulo
Ihe na September 28, 2020 July 6, 2021 by Matt
esi mee aka sanitizer
Ee, ọ dịghị ihe na-akwọ aka rue ugbu a na igbochi ọrịa na-efe efe dị ka COVID-19. G WHATN IF Ọ B IFR IF na mmiri na ncha adịghị n’ụdị ọnọdụ a kapịrị ọnụ?
Ọzọkwa, dịka ị maralarị, karama nke aka aka na-ere ngwa ngwa n'oge nsogbu ahụike ọha na eze. Ma echegbula-iji aka gị na-edozi onwe gị dị mfe. Naanị ihe ọ na-ewe bụ ihe atọ dị na usoro atọ.
Nọgide na-agụ iji chọpụta otu esi eme ya.
Kedu ihe m kwesịrị iji mee nsacha aka?
mmanu mmanu mmanu mmanu
Ime aka gị nke ọma bụ ihe dị mfe ịme na ọ dị mkpa ihe atọ:
Isopropyl ma ọ bụ mmanya na-egbu egbu (na 99% olu mmanya)
Otu mmanụ dị mkpa （Anyị na-akwado eucalyptus mmanụ dị mkpa, mmanụ osisi tii na mmanụ lavender）
Isi ihe na-eme ka onye na-edozi ahụ dị ọcha ma na-eme ka mmiri dị ọcha bụ ịrapagidesi ike 3: 1 nke mmanya na aloe vera. Nke ahụ na-eme ka mmanya na-aba n'anya karịa pasent 60. 60% mmanya olu bụ nke kacha nta ego iji kpochapụ ọtụtụ nje bacteria, dị ka CDC.
Kedụ ka m ga - esi wee mee aka m?
Anyị nwere ntụzịaka abụọ maka gị. Nke mbụ dị mfe ịme - yana ihe ị nwere ike ịnwe na kabinet gị, yabụ ọ dị mkpa maka ihe mberede. Ọ bụ ezie na nke abụọ nwere ike ịdịtụ mgbagwoju anya, ọ ka ike. Ọ bụrụ na i buru ụzọ mee atụmatụ ma zụọ ahịa, ọ gaghị esiri gị ike.
Ntụziaka Sanitizer Ntụziaka
3 Efrata ị chọrọ:
3/4 iko nke isopropyl ma ọ bụ mmanya na-egbu egbu (99%)
1/4 iko aloe vera gel (iji mee ka aka gị dị mma ma mee ka iwe nke mmanya dị ọcha)
10 tụlee nke mmanụ dị mkpa (dị ka Eucalyptus mkpa mmanụ, lavender mmanụ, tii osisi mmanụ.)
Tinye ihe niile n’ime efere, ọkacha mma ka gị na ya wee wụsa mmiri, dịka iko eji atụ ihe.
Ghichaa ihe ndi ahu na ngaji. Kpoo ngwakọta na whisk iji mee ka ọ bụrụ onye na-edozi ihe.
Tinye aka na-edozi aka n'ime karama efu, hapụ ka concoction gị nọdụ maka awa 60.
Mgbe ị na-eme aka ncha n'ụlọ
Nwere ike ịgbaso usoro ndị a:
Mee ka aka na-edozi ihe na ebe dị ọcha.
Sanitize countertop na a diluted ịcha ọcha ngwọta.
Saa aka gị tupu ịmechaa aka.
Anyị kwesịrị ngaji dị ọcha na whisk iji gwakọta ha. Saa ngwaahịa ndị a nke ọma tupu i jiri ha.
Gwakọta ihe niile dị na ya ruo mgbe agwakọtara ha nke ọma.
Biko emetụla ngwakọta aka gị ruo mgbe ọ dị njikere maka ojiji.
Hapụ aka gị ka ọ nọdụ ala ma ọ dịkarịa ala awa 60 mgbe ị gachara. Onye na-edozi ahụ chọrọ oge iji gbuo nje ọ bụla nwere ike iwebata n'oge usoro ngwakọta.
Ọ bụrụ na ị na-a solutionụ azịza nke ị ofụ mmanya na-aba n'anya, jiri mmiri dị ala karị. Cheta, 60% nke mmanya na-aba n'anya bụ obere opekempe chọrọ iji kpochapụ ọtụtụ nje.
Maka nnukwu aka nri, onye WHO nwere usoro maka ya:
Mmanya na-egbu egbu ma ọ bụ ethanol
Igbapu distilled ma ọ bụ sie mmiri oyi
Ọ bụ ezie na gel sanitizer na-arụ ọrụ ahụ, aloe na-ahapụkwa akpụkpọ ahụ anyị iwe. Yabụ, lee uzommeputa nke dị mma na nke nwere ike, nke ndị WHO na-atụ aro.
Glycerol ma ọ bụ glycerin
Mmiri na-ekpo ọkụ
8 tụlee nke Eucalyptus mkpa mmanụ
Gwakọta 12 mmiri ounces nke mmanya na-egbu egbu na 10mL nke glycerol (nke dịka 2 teaspoons).
Nwere ike ịzụta glycerol na ntanetị, nke bụ ihe dị mkpa ebe ọ bụ na ọ na-egbochi mmanya ị dryụ aka anyị.
Ọ bụrụ na enweghị m ike ịhụ glycerol?
Ọ bụrụ na ọ na-esiri gị ike ịchọta ite nke glycerol, gaa n'ihu na usoro nri ndị ọzọ. Echefukwala ịmị aka gị mgbe ị gachara iji sanitizer.
Gwakọta na ọkara mmiri ounce nke hydrogen peroxide, mgbe ahụ 3 ounces nke mmiri oyi ma ọ bụ sie. Tinye 8 tụlee nke Eucalyptus mmanụ dị mkpa iji mechaa.
Buru ihe ngwọta n'ime karama ịgba. Ma ị nwere ike iji mmiri mechie akwa akwụkwọ iji jiri nke ahụ dị ka nhichapụ.
Etu ị ga-esi jiri akwa sanitizer
Principleskpụrụ abụọ ị ga-erubere isi mgbe ị na-eji ihe nhicha aka: tinye ya n'ime akpụkpọ gị ruo mgbe aka gị ga-akpọ nkụ.
Ikwesiri ime ya n’ime akpụkpọ gị ruo mgbe aka gị ga-akpọ nkụ.
Ma, ọ bụrụ na aka gị dị mmanu ma ọ bụ na-adịghị ọcha, ị ga-ebu ụzọ sachaa ha na ncha na mmiri.
N'iburu nke ahụ n'uche, lee ụfọdụ aro maka iji aka gị na-edozi ihe nke ọma:
Raygba ma ọ bụ tinye sanitizer ahụ n'ọbụ aka otu aka.
Mechie aka gị nke ọma. Gbaa mbọ hụ na aka gị na-ehicha aka gị niile na mkpịsị aka gị niile.
Gaa n'ihu na-ehichapụ ihe dị ka 30 ruo 60 sekọnd ma ọ bụ ruo mgbe aka gị ga-akpọ nkụ. O nwere ike iwe opekata mpe otu nkeji, ma eleghị anya, karịa, maka aka iji kpochaa ọtụtụ nje.
Mmetụta nke Aka Aka
kedu ka esi edozi edozi
Kedu nje nwere ike iji aka gị wepu ihe?
Dị ka CDC si kwuo, ihe na-eme ka mmanya na-aba n'anya nke na-eme ka mmanya na-aba n'anya nwere ike iwepu ụmụ nje na aka gị ngwa ngwa. Ọ nwere ike n'otu aka ahụ nyere aka bibie ọtụtụ ihe na-akpata ọrịa ma ọ bụ ndị na-akpata ọrịa n'aka gị, gụnyere coronavirus SARS-CoV-2.
Agbanyeghị, ọbụnadị ndị na-ehicha aka na-a alcoholụbiga mmanya ókè nwere mmachi na anaghị ewepụ ụdị nje niile.
Dabere na CDC, ndị na-ehicha aka anaghị ewepụ kemịkal nwere ike ịmerụ ahụ. Ọ baghị uru na-egbu nje ndị a:
Cryptosporidium (nke na-akpata cryptosporidiosis)
C. diff (ndebiri nke clostridium siri ike)
Ọzọkwa, ihe nhicha aka nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụrụ na aka gị ruru unyi ma ọ bụ na-ete mmanụ. Ọnọdụ a nwere ike ime mgbe ị rụchara ọrụ ubi, ịkọ ugbo ma ọ bụ igwu egwuregwu.
Ọ bụrụ na aka gị yiri ihe ruru unyi ma ọ bụ na-ete ude, gaa maka ịkwọ aka kama iji aka na-edozi ihe.
Washingsa Aka vs. Aka aka
Ghọta mgbe ịkwesịrị ịsa aka gị, na mgbe ndị na-ehicha aka nwere ike inye aka, bụ isi ihe iji chebe onwe gị pụọ na coronavirus akwụkwọ yana ọrịa ndị ọzọ, dịka flu flu.
Ọ bụ ezie na ha abụọ nwere uru nke aka ha, iji ncha na mmiri sachaa aka gị mgbe niile na-ebute ụzọ. Jiri naanị ịsacha aka mgbe ị na - enweghị ike ịsa aka na ọnọdụ enyere.
Na mgbakwunye, ọ dị oké mkpa iji na-ehicha aka gị mgbe niile:
Mgbe ị gachara ụlọ ịsa ahụ
Mgbe ịfụchara imi gị, ụkwara, ma ọ bụ mgbe ị zụrụ azụ
Ke ama okotụk mme ikpehe ke an̄wa
Zọ kachasị dị irè iji saa aka gị nke ọma:
Jiri mmiri dị mma, na-agba agba.
Mee mmiri ka mmiri buru ụzọ dee mmiri gị.
Mgbe ahụ, gbanyụọ mmiri, jiri ncha sachaa aka gị.
Ghichaa aka gị abụọ na ncha maka sekọnd 20. Sichaa azụ aka gị, n’agbata mkpịsị aka gị na n’okpuru mbọ gị, iji hụ na aka gị dị ọcha.
Gbanye mmiri ma saa aka gị. Jiri akwa nhicha ma ọ bụ ikuku.
Nchedo Nchedo nke Ndị Na-edozi Aka
Aylụ mmanya na-egbu mmanya nke ethyl (ethanol) dị mma mgbe ejiri ya mee ihe. Ma ha nwere ike ịkpata nsị mmanya ma ọ bụrụ na mmadụ elo ihe karịrị ọnụ abụọ.
Mgbaàmà ahụike na ihe ịrịba ama metụtara mmanya na-egbu egbu
Mgbaàmà nke ị alcoholụbiga mmanya ókè na-agụnye ịgbọ agbọ, ọgbụgbọ, ume iku ume na ụra. Ọ bụrụ n ’ịhụ otu n’ime ha ma ọ bụ ụfọdụ n’ime ha, ị ga - eche maka ohere ị ofụ mmanya ịitizụ mmanya na - aba n’anya ma kpọtụrụ ebe a na - achịkwa nsi nsị.
Otu esi eji sanitizer n'enweghị nsogbu
Jiri ndị aka na-a alcoholụ mmanya na-aba n'anya n'ụzọ ziri ezi, yana usoro nchekwa nchekwa ụmụaka kwesịrị ekwesị. Ijide n'aka na echekwara ha ebe ụmụaka erughị eru nwere ike izere ihe mberede.
Nọgide na-amata ihe iyi egwu nwere ike iji ụma na-a handụ mmanya na-edozi aka nwere ike itinye aka n'ịgba ume kwesịrị ekwesị ma zere nsonaazụ na-adịghị mma.
Ihe nhicha aka bụ ihe na-enye aka igbochi mgbasa nke nje na nje mgbe enweghị ncha na mmiri. Ndị na-ehicha aka na-a Alụ mmanya na-egbu egbu nwere ike ịchebe gị ma belata mgbasa nke akwụkwọ coronavirus.
Ọ bụrụ n ’ọ na-esiri gị ike iweta aka gị na ụlọ ahịa dị n’obodo gị, ị nwere ike ịgbaso ntuziaka anyị mgbe niile iji mee nke gị. Naanị ihe atọ ị chọrọ bụ: ịse mmanya, aloe vera gel na mmanụ dị mkpa.
Ọ bụ ezie na ndị na-ehicha aka nwere ike ịbụ ụzọ dị irè isi kpochapụ nje bacteria, iji ncha na mmiri kwọọ aka gị kwesịrị ịbụ ihe kacha mkpa mgbe niile.
Ọ bụrụ na ị ka na-enwe nchegbu ọ bụla, hapụ okwu ebe a.
Nke a na ntinye e gwa ke blog. Bookmark na Permalink.
Mmanụ dị mkpa maka ọnya
12+ Frankincense Mkpa Oil Uru na ya sara mbara ojiji
4 echiche na “Etu esi emezi Sanitizer na ulo"
Sandra ekwu, sị:
Ahụrụ m nke a n'anya! M gbakwunyere pepemint na oroma m na m hụrụ isi! Ana m enweta ekele mgbe ọ bụla m kesara! Daalụ nke ukwuu!
October 27, 2020 na 11: 07 pm
Moksha dị mkpa ekwu, sị:
Enwere m mmasị n'ịgụ isiokwu gị n'ihi na usoro ịde ederede gị dị oke mma, ọ baara anyị niile uru…
Daalụ maka ịkekọrịta ihe ọmụma na anyị!
November 24, 2020 na 8: 03 am
Ка Ценкова ekwu, sị:
Зпозпалзвам Маслото на крадците. Прочетете какво е това масло -то съчетава няколко вида етерични масла .Истина или не, но историята е интересна, а древната рецепта днес е призната от съвременната наука, като мощно средство с антимикробно действие. Ọ na -enye gị ohere ilele ihe nkiri. Nke a bụ ihe dị ka nkeji iri ise na ise ruo iri ise gara aga - масло от карамфил, лимонено масло, масло от канела, масло от лота саларарин Nke a bụ ihe na -atọ gị ụtọ ma ọ bụrụ na ị na -eme ya -ị ga -ahụ ya ọzọ. Mgbe nke ahụ gasị, ị ga -enweta akara ngosi ". Ị ga -enwe ike ị nweta ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na ị ga -enwe ohere ị nweta ihe na -aga n'ihu na -aga n'ihu na -aga n'ihu, ka m wee nwee ike nweta ya ọzọ. Ị nwere ike ị nweta nke a, ị ga -enwekwa ike ị nweta ya ma ọ bụrụ na ị nwere ohere ị nweta ihe na -enye gị ohere ị nweta ya ọzọ. Прочетете - Как да разреждаме етерични масла.
January 20, 2021 na 12: 04 pm
Vancouver idebe ihe ọcha ekwu, sị:
Daalụ nke ukwuu maka ịkekọrịta echiche ndị a. Enwere m ekele maka mbọ gị maka ịmepụta ọdịnaya a enweghị oke. Anọ m na-achọ ọdịnaya dị otú ahụ banyere otu esi eji aka edozi ụlọ, ị nyeere m aka otu, nnukwu post !!
April 24, 2021 na 7: 52 pm
Etu esi emezi Sanitizer na ulo 4 Comments
Mmanụ dị mkpa maka mgbu azụ 4 Comments
Mkpa mmanụ (1)
GabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiNụrụ Island na McDonald IslandsHondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsle nke MmadụIsraelItalyIvory CoastJamaicaJapanJerseyJọdanKazakhstanKenyaKiribatiKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorth MacedoniaNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalestian TerritoryPanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé na PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Kitts na NevisSaint LuciaSaint Martin (Dutch akụkụ)Saint Martin (French akụkụ)Saint Pierre and MiquelonSaint Vincent na GrenadinesSamoaSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Georgia / Sanwichi IslandsSouth KoreaSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard na Jan MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad na TobagoTunisiatoro toroTurkmenistanTurks and Caicos IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited Alaeze (UK)United States (US)United States (US) Minor dịpụrụ adịpụ IslandsUruguayUzbekistanVanuatuVaticanVenezuelaVietnamVirgin Islands (British)Virgin Islands (US)Wallis and FutunaWestern SaharaYemenZambiaZimbabwe